Igodo 3 maka igodozi ihe nlere n 'ulo ahia ... na nnata | Martech Zone
Tuesday, October 20, 2015 Monday, October 19, 2015 Douglas Karr
Na ngwụcha izu a, m gara zụọ ahịa na nke ọhụrụ Ahịa Kroger. Akụkụ akụkụ… ma ọ bụrụ na naanị Kroger chere etinye na ha online ọnụnọ dị mkpa dị ka ha mkpọsa ọnụnọ. M digress. E wuru ụlọ ahịa ọhụrụ ahụ n'okporo ámá site na Kroger gara aga. Otu nzọụkwụ n'ime ma ị nwere ike ịhụ ihe kpatara ya.
Ebe a na-eme bred na achịcha Artisan ọhụrụ, nri na tebụl gọọmenti a raara onwe ya nye, Starbucks, sushi counter, na ịzụ ahịa otu nkwụsị maka ụmụ ọhụrụ, ihe eji egwuri egwu, ime ụlọ ịwụ, ime ụlọ ịwụ, ndị ahịa ọla, na kichin. O nwere ụlọ nri na ngalaba ezumike. Nnukwu ụlọ ahịa a nwere ihe niile. Ma ọ bụ ya?
Ka m na-agagharị n’ụlọ ahịa na-achọ ihe ndị na-asa ákwà, achọpụtara m ụfọdụ ịdị mma. Otu igodo bụ na ngalaba nke dị n'ihu nlele nyocha dị ka ụlọ ahịa n'ime ụlọ ahịa. Chọrọ bulie mmiri ara ehi na akwụkwọ nri ọhụrụ (ọbụlagodi obodo a toro)? Nwere ike ịbanye na ịpụ na nkeji ole na ole. Njem m were awa ole na ole ka m na-enyocha akụkụ ọ bụla nke ụlọ ahịa ahụ.
Iji chọta ebe a na-asa akwa, Achọrọ m ilelitere anya na ihe ịrịba ama nke rụtụrụ m aka na warawara 48. Agara m laghachi azụ n'akụkụ ahụ nke ụlọ ahịa ahụ, bulie Tide m, ma jee ije gburugburu… ebe ahụ niile dị mma, ihe ọhụrụ. bu. M jidere Starbucks, zuo ike, wee lelee.
Ahụmịhe ụlọ ahịa ahụ nwere ụzọ abụọ n'ụzọ atọ nke ụzọ iji zuo oke. Ihe omuma ihe omuma a sitere na Moki sitere na Forrester Ọdịnihu nke ụlọ ahịa dijitalụ. Ọ na-egosi ụzọ ụzọ igodo atọ dị na ahụmịhe ụlọ ahịa na-enweghị atụ n'oge a:
Agaba - Echere m na ngalaba ọhụrụ ahụ zuru oke. Enwere Wal-mart n'akụkụ nke ọzọ nke ụzọ ahụ gafere, mana site na ịbụ ụlọ ahịa na ihe ndị ọzọ, Kroger nyere ọtụtụ nhọrọ ezinụlọ zuru oke. Eziokwu ahụ bụ na m nwere ike iburu kandụl rịbọn ọhụrụ, bourbon dị elu, ma ọ bụ ite eghe egosiri na Kroger ghọtara ndị ahịa ya.
Mkpa - Oge a na oge adịrị mma. M na-ezere ịga ochie Kroger iji bulie creamer cream n'ihi na ọ chọrọ njem gafee ụlọ ahịa niile maka otu ịzụta. Aga m aga ụlọ ahịa dị mma dị na mpaghara. Ugbu a enwere m ike ịga Kroger ma bulie ụfọdụ anụ ọhụrụ, kwa!
ahaziri - Nke a bụ ebe enwere ohere maka Kroger ịbawanye ahụmịhe ụlọ ahịa ha. Ọ bụrụ na ha nwere ozi nkwukọrịta dị nso na ngwa mkpanaka ha, ikekwe ụfọdụ mgbama ụlọ ahịa, yana ụfọdụ ngosipụta siri ike karịa tebụl wara ụlọ akwụkwọ ochie, enwere m ike iwe obere akụ na ụba niile. Ma, ọ bụrụ na edebanye aha Kaadị Plus m, ha nwere ike ịme m ụfọdụ onyinye mgbe m na-agagharị na ụlọ ahịa ahụ.
Ihe dị oke mkpa bụ na ụlọ ahịa ahụ achọghị ka emezigharị ya - ọ bụ ụlọ ahịa epic. Onwe m, ọ ga-amasị m ịhụ ụfọdụ oche ntụsara ahụ na akwa ndina a fesara na ụlọ ahịa ahụ. Ka ndi mmadu na - achughari - ka ha na - eche banyere ihe ha choro izu. M kwụsịrị na Starbucks wee gaa buru ihe iri na abụọ ma ọ bụ karịa.
Kroger nwere ike irite uru site na ịmalite teknụzụ eji ya eme ihe. Ka m na-enyocha, nwanyị ahụ nọ n’azụ m siri ọnwụ na m nwere obere ụgbọ ibu nke ngụkọta ego zuru. Ọ hụghị Mahi, Woodford Reserve, na Sandalwood kandụl m zụtara. Eleghi anya, emefuru m okpukpu abụọ karịa ka m tụrụ anya ya.
Enwere m ike iche n'echiche ihe m gaara eme ma ọ bụrụ na njem m bụ ahaziri!
Tags: na-echerein-store ahụmahụEbeeahịa krogerretailahụmahụ ahịaụlọ ahịa